Apple Podcasts Subscription, dia hiasa amin'ny 15 Jona | Vaovao IPhone
Tao anatin'ny efa-andro mahery dia hiasa ny serivisy famandrihana podcast vaovao an'i Apple. Amin'ny 15 Jona, ny orinasa Cupertino dia hampihetsika ity serivisy ity ny fandoavam-bola fantatra amin'ny anarana hoe Apple Podcasts Subscription.
Tokony hazava tsara izany ity fomba fandoavam-bola ity dia tsy misy fiatraikany amin'ny Podcasts rehetra fa afaka misoratra anarana lavitra an'io isika, ireo podcasters izay maniry ny hampiasa ity serivisy ity ihany ary hamorona famandrihana ho an'ny atiny.
Apple dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fahatongavan'ilay serivisy ny talata 15 jona ho avy izao raha tsy misy ny olana minitra farany ary amin'ity fomba ity dia hampihetsika ny serivisy izay nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 20 aprily. Mila manizingizina indray izahay fa ity sehatra fandoavam-bola ity dia hisy fiantraikany manokana amin'ireo mpampiasa rehetra te-hihaino podcast izay manana mpamorona atiny manampy ny fomba famandrihana. Ohatra, ao amin'ny Actualidad iPhone, amin'izao fotoana izao dia ho afaka ireto podcast ireto.
Mazava ho azy fa ny fiampangana hihaino podcast dia mety ho sabatra roa lela, satria mpampiasa maro no mahita tsara ireo fomba famandrihana ireo ary maro hafa tsy dia be loatra. Azontsika atao ny milaza fa fomba iray hampiasana matihanina podcast fa tsy maintsy marihina koa fa ny fampidirana vola isam-bolana na famandrihana dia tsy midika hoe hivoatra be ity podcast ity. Amin'ny lafiny iray, ho an'ireo izay manontany tena, Apple dia manolotra ny serivisy fotsiny dia tsy handray komisiona amin'ireo podcast ireo izay manampy ny fomba famandrihana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Apple Podcasts Subscription, hiasa amin'ny 15 Jona
Ny App Store ao amin'ny iOS 15 dia hanafina ny topi-maso ny fampiharana napetraka